Una cookie waa feyl qoraal ah la'aada taas ayaa lagu kaydiyaa biraawsarkaaga markaad booqato ku dhowaad bog kasta oo bog ah. Faa'iidada ay cookie waa in shabakadu awood u leedahay inay xasuusato booqashadaada markaad ku soo noqotid daalacashada boggaas. In kastoo dad badani ogayn, cookies Waxay shaqeynayeen 20 sano, markii ay soo baxeen bog furayaasha ugu horreeya ee World Wide Web.
MA AH cookie?
Ma ahan virus, Trojan, dixirigoodu, maahan spam, maahan spyware, mana fureyso daaqadaha pop-up.
Macluumaad noocee ah ayuu sameeyaa a cookie?
ka cookies Badanaa ma keydiyaan macluumaadka xasaasiga ah ee adiga kugu saabsan, sida kaararka deynta ama faahfaahinta bangiga, sawirrada, aqoonsigaaga ama macluumaadkaaga shakhsiyeed, iwm. Xogta ay hayaan waa dabeecad farsamo, dookhyo shaqsiyeed, shakhsi ahaaneed waxyaabaha, iwm.
Server-ka ma kula midoobayo shaqsi ahaan laakiin wuxuu ku xirayaa biraawsarkaaga. Xaqiiqdii, haddii aad si joogto ah uga baaraandegto Internet Explorer oo aad isku daydo inaad isla shabakadda ka baartid Firefox ama Chrome, waxaad arki doontaa in webku uusan garowsanayn inaad isku qof tahay maxaa yeelay dhabtii wuxuu xiriirinayaa biraawsarka, qofka maahan.
Waa maxay nooca cookies jira?
cookiesFarsamooyinka: Iyagu waa kuwa ugu aasaasiga ah oo u oggolaanaya, iyo waxyaabo kale, in la ogaado marka qof ama codsi otomaatig ah uu daalacanayo, marka isticmaale aan la aqoon iyo isticmaale diiwaangashan ay daalacanayaan, hawlaha aasaasiga ah ee hawlgalka degel kasta oo firfircoon.
cookiesFalanqeyn: Waxay aruuriyaan macluumaadka ku saabsan nooca hagista aad sameyneyso, qeybaha aad inta badan isticmaasho, alaabooyinka lala tashado, waqtiga isticmaalka, luqadda, iwm.
cookiesXayeysiinta: Waxay muujinayaan xayeysiis ku saleysan daalacashadaada, waddanka aad ka soo jeedo, luqadda, iwm.
Maxaa ay yihiin cookies leh iyo kuwa saddexaad?
ka cookies u gaar ah waa kuwa ay soo saareen bogga aad booqanayso iyo kan saddexaad waa kuwa ay soo saareen adeegyada dibadda ama bixiyeyaasha sida Facebook, Twitter, Google, iwm.
Maxaa dhacaya haddii aan joojiyo cookies?
Si aad u fahanto baaxadda in deactivating ah cookies Waxaan ku tusayaa tusaalooyin qaarkood:
Ma awoodi doontid inaad la wadaagto waxyaabaha ku jira websaydhkaas Facebook, Twitter ama shabakad kale oo bulsheed.
Websaydhku ma awoodi doono inuu la qabsado waxyaabaha ku jira dookhaaga shaqsiyeed, sida had iyo jeer dhacda dukaamada internetka.
Ma awoodi doontid inaad gasho aagga shaqsiyadeed ee boggaas, sida my accountama my profileoamarada My.
Dukaammada onlaynka ah: Suuragal kugu noqon mayso inaad wax ka iibsato khadka tooska ah, waa inay ahaadaan taleefan ama booqashada dukaan jireed haddii uu mid leeyahay.
Suurtagal noqon mayso inaad jaangoyso dookhyada juqraafi ahaan sida soonaha waqtiga, lacagta ama luqadda.
Websaydhku ma awoodi doono inuu ku sameeyo falanqaynta webka booqdayaasha iyo taraafikada webka, taas oo adkeyneysa inuu webka tartan la galo.
Ma awoodi doontid inaad wax ku qorto baloogga, ma awoodi doontid inaad soo dhigto sawirro, soo dirto faallooyin, qiimeyn ama qiimeyso waxyaabaha. Webku sidoo kale ma awoodi doono inuu ogaado haddii aad tahay qof bani'aadam ah ama codsi otomaatig ah oo daabaca spam.
Suurtagal noqon mayso in la muujiyo xayeysiinta sida gaarka loo leeyahay, taas oo yareyn doonta dakhliga xayeysiinta ee shabakadda.
Dhammaan shabakadaha bulshada ayaa adeegsada cookiesHaddii aad barkinta ka furto, ma awoodid inaad adeegsato wax shabakad bulsheed ah.
Ma saari kartaa cookies?
Haa. Kaliya ma tirtirto, laakiin sidoo kale xannibaadda, guud ahaan ama qaab gaar ah oo loogu talagalay degel gaar ah.
Si looga saaro cookies bogga internetka waa inaad tagtaa qaabeynta biraawsarkaaga halkaasna waad ka raadin kartaa kuwa la xiriira domainka su'aasha ku jirta oo aad u sii waddo tirtirkiisa.
configuring cookies loogu talagalay bog furayaasha ugu caansan
Waa tan sida loo helo a cookie biraawsarka la go'aamiyay Chrome. Fiiro gaar ah: talaabooyinkani way kala duwanaan karaan iyadoo kuxiran nooca biraawsarka:
Tag Goobaha ama Xulashada adoo maraya Faylka faylka ama adigoo gujinaya astaanta habeynta ee ka muuqata midigta kore.
Waxaad arki doontaa qaybo kala duwan, guji ikhtiyaarka Show Advanced Options.
Tag Privacy, goobaha Content.
Xullo Dhammaan cookies iyo xogta goobta.
Liis ayaa ka soo muuqan doona dhammaan cookieskala soocaa domain. Si ay kuugu fududaato inaad hesho cookies qayb ka mid ah cinwaanka qayb ahaan ama gebi ahaanba gal cinwaanka berrinka Raadi cookies.
Ka dib markaad sameyso shaandhadaan, hal ama dhowr xariiq ayaa ka soo muuqan doona shaashadda leh cookiesee shabakadda la codsaday. Hadda waa inaad doorataa oo riix X si loo sii wado tirtirkeeda.
Si aad u hesho goobaha cookies biraawsarka Internet Explorer Raac talaabooyinkan (way kala duwanaan karaan iyadoo kuxiran nooca biraawsarka):
Tag Tools, Options Internet
U dhaqaaq dhaqaajinta si aad ula qabsato heerka asturnaanta aad rabto.
Si aad u hesho goobaha cookies biraawsarka Firefox Raac talaabooyinkan (way kala duwanaan karaan iyadoo kuxiran nooca biraawsarka):
Tag fursadahao doorbidida waxay kuxirantahay nidaamkaaga hawlgalka.
En recorddooro U adeegso dejimaha gaarka ah taariikhda.
Hadda waxaad arki doontaa ikhtiyaarka aqbasho cookies, waad hawlgalin kartaa ama barkinta ayaad ka jari kartaa hadba sida aad u jeceshahay.
Si aad u hesho goobaha cookies biraawsarka Safari loogu talagalay OSX Raac talaabooyinkan (way kala duwanaan karaan iyadoo kuxiran nooca biraawsarka):
Tag doorbididaka dibna Privacy.
Meeshan waxaad ku arki doontaa ikhtiyaarka cookies blockinaad dejiso nooca qufulka aad rabto inaad sameyso.
Si aad u hesho goobaha cookies biraawsarka Safari ee macruufka Raac talaabooyinkan (way kala duwanaan karaan iyadoo kuxiran nooca biraawsarka):
Tag goobahaka dibna Safari.
Tag Asturnaanta & Amniga, waxaad arki doontaa ikhtiyaarka cookies blockinaad dejiso nooca qufulka aad rabto inaad sameyso.
Si aad u hesho goobaha cookies biraawsar qalabka Android Raac talaabooyinkan (way kala duwanaan karaan iyadoo kuxiran nooca biraawsarka):
Orod biraawsarka oo riix furaha menuka dibna goobaha.
Tag Amniga iyo Asturnaanta, waxaad arki doontaa ikhtiyaarka aqbasho cookiessi aad u awoodo ama aad u joojiso sanduuqa.
Si aad u hesho goobaha cookies biraawsar qalabka Windows Phone Raac talaabooyinkan (way kala duwanaan karaan iyadoo kuxiran nooca biraawsarka):
Furan Internet Explorerka dibna dheeraad ahka dibna qaabeynta
Hadda waad dhaqaajin kartaa ama barkinta kartaa sanduuqa ogolaan cookies.
Macluumaadkee buu keydiyaa buskudka?
Waa maxay cookies iyo qaybta saddexaad?
Maxaa dhacaya haddii aan joojiyo cookies-ka?
Ma tirtiri kartaa cookies-ka?
Dejinta cookie ee daalacashada ugu caansan
Mashiinka dharka » Macluumaadka ku saabsan buskudka